ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ကြီးမှူးကျင်းပသည့် ဘာသာပြန်စာပေ စာတမ်းဖတ်ပွဲ (၂၀၁၇) ၌ ဒေါက်တာမြင့်ဇံ ဖတ်ကြားသော “ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းကို မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်မှ မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုမှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သုံးသပ်ချက်အချို့” စာတမ်းအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ သဘောထားမှတ်ချက် | မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်
၁။ “Universal Declaration of Human Rights” ခေါင်းစဉ်ကို ဘာသာပြန်ဆိုမှု
(က) “Universal Declaration of Human Rights” ခေါင်းစဉ်ကို “ကမ္ဘာ့ လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း”ဟု မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် (“ကော်မရှင်”) က ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
(ခ) “Universal Declaration of Human Rights” ခေါင်းစဉ်ကို “ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း”ဟု စာတမ်းဖတ်ကြားသူက ဘာသာ ပြန်ဆိုပါသည်။
သဘောထားမှတ်ချက်။ “Universal” ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာနက ထုတ်ဝေသော အင်္ဂလိပ်-မြန်မာအဘိဓာန်၊ ဆဋ္ဌမအကြိမ် ပုံနှိပ် ခြင်း၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် “ကမ္ဘာအနှံ့။ ကမ္ဘာတစ်လွှား။ ကမ္ဘာ ကုန်။” ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ “Universal” ကို “ကမ္ဘာ့” ဟု ပြန်ဆိုခြင်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ပြည်သူများ သာမက အစိုးရများပါ အကျုံးဝင်ပြီးဖြစ်သဖြင့် အဓိပ္ပာယ် လွဲချော်မှု မရှိသည့်အပြင် ဖတ်ရှုသူအတွက် နားလည်ရန် လွယ်ကူပြီး စကားလုံးအားဖြင့်လည်း ကျစ်လျစ်မှု ရှိမည်ဖြစ်ပါ သည်။
၂။ “Preamble” ကို ဘာသာပြန်ဆိုမှု
(က) “Preamble” ကို “နိဒါန်း” ဟု ကော်မရှင်က ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
(ခ) “Preamble” ကို “အဖွင့်နိဒါန်း”၊ “စကားချီး” (သို့မဟုတ်) “အချီး”ဟု ဘာသာပြန်နိုင်ကြောင်း စာတမ်းဖတ်ကြားသူက ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
သဘောထားမှတ်ချက်။ “Preamble” ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာနက ထုတ်ဝေသော အင်္ဂလိပ်-မြန်မာအဘိဓာန်တွင် “နိဒါန်း” ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ ထို့ပြင် မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာန က ထုတ်ဝေသော မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်၊ ဧကာဒသမ အကြိမ် ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် စကားချီးကို “introduction; preface” ဟူ၍ ဖော်ပြထားပါသည်။ ကော်မရှင်က ဘာသာ ပြန်ဆိုရာတွင် တရားဝင် အထောက်အထားဖြစ်သော ယင်း အဘိဓာန်များကို ကိုးကား၍ “introduction” ကို “စကားချီး” ဟုလည်းကောင်း၊ “Preamble” ကို “နိဒါန်း” ဟုလည်း ကောင်း သုံးနှုန်းထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၃။ “နိဒါန်း” ၏ ဒုတိယအပိုဒ်ကို ဘာသာပြန်ဆိုမှု
(က) “Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind” ကို “လူ့အခွင့်အရေးကို အလေးမထား မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းသည် လူသားတို့၏အကောင်းအဆိုး အကြောင်းအကျိုး ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းကို ဖျက်ဆီး သည့် ရိုင်းစိုင်းရက်စက်သော အပြုအမူများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သောကြောင့်လည်း ကောင်း” ဟု ကော်မရှင်က ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
(ခ) “Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind” ကို “… လူ့အခွင့်အရေးကို အလေးမထား မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းသည် လူသားတို့၏ စိတ်လိပ်ပြာသန့်မှု conscience ကို တုန်လှုပ်၊ ချောက်ချား၊ ထိခိုက်စေသော outraged the conscience of mankind ရိုင်းစိုင်း ယုတ်မာ သည့်လုပ်ရပ် (barbarous acts) ကို ပေါ်ပေါက်စေခဲ့သောကြောင့်လည်း ကောင်း” ဟု စာတမ်းဖတ်ကြားသူက ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
သဘောထားမှတ်ချက်။ “barbarous” ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာနက ထုတ်ဝေသော အင်္ဂလိပ်-မြန်မာအဘိဓာန်တွင် “ရိုင်းစိုင်းသော။ ရိုင်းပျသော။ ကြမ်းတမ်းသော။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော။” ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ “conscience” ကို မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာနက ထုတ်ဝေသော အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန်တွင် “(ကောင်းဆိုး ကျိုးပြစ် ခွဲခြားသိမြင်တတ် သော) အသိစိတ်။ အသိတရား။ စိတ်ဓာတ်။” ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ ယင်းအဘိဓာန် ဖွင့်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ဖတ်ရှုသူအတွက် နားလည်ရန် လွယ်ကူသည့်စာ စကားဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မရှင်၏ ဘာသာပြန်ဆိုချက်သည် outraged the conscience of mankind ဟူသော အဓိပ္ပာယ်နှင့် လွဲချော်မှု မရှိဘဲ အနှစ်သာရ ကို ပေါ်လွင်စေပါသည်။
၄။ “နိဒါန်း” ၏ သတ္တမအပိုဒ်ကို ဘာသာပြန်ဆိုမှု
(က) “Whereasacommon understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,” ကို “အဆိုပါ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များကို အတူတကွ နားလည်မှုရှိခြင်းသည် ဤကတိကဝတ်ကို အပြည့်အဝ အကောင်အထည်ဖော် စေရေးအတွက် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သောကြောင့်လည်းကောင်း၊”ဟု ကော်မရှင် က ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
(ခ) “Whereasacommon understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,” ကို “အဆိုပါ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များကို [ကမ္ဘာသူ၊ ကမ္ဘာသားတို့က] တစ်သဘောတည်း ‘ဘုံ’ နားလည်ခြင်းသည် [အထက် အပိုဒ်ပါ] ကတိကဝတ်တို့ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အရေးကြီးသော [အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်] ဖြစ်သောကြောင့်လည်းကောင်း” ဟု စာတမ်း ဖတ်ကြားသူက ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
သဘောထားမှတ်ချက်။ “common” ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို ဖွင့်ဆိုရာတွင် ဆိုလိုရင်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် စာသားကို Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Ninth Edition, 2015) ၌ “shared by or belonging to two or more people or by the people inagroup” ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုထားရာ ၎င်းအဓိပ္ပာယ်နှင့် ကိုက်ညီပြီး ဖတ်ရှုသူအတွက် နားလည်ရန် လွယ်ကူသည့်စာ စကားဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
“greatest importance” ကို ဘာသာပြန်ဆိုရာတွင်လည်း အပိုအလို မပါရှိဘဲ ဖတ်ရှုသူအတွက် နားလည်ရန် လွယ်ကူ သည့်စာစကားဖြင့် မူရင်းဆိုလိုချက် အနှစ်သာရ ပေါ်လွင်စေ ရန် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။
၅။ “နိဒါန်း” ၏ နောက်ဆုံး အပိုဒ်ကို ဘာသာပြန်ဆိုမှု
(က) “…to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure…” ကို “…အဆိုပါ အခွင့်အရေးနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များကို …တိုးတက်သော အစီအမံ များကို အားထုတ်ကြစေရန်အတွက်လည်းကောင်း…” ဟု ကော်မရှင်က ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
(ခ) “progressive measures”ကို “အဆင့်အစီအစဉ်အလိုက် တဖြည်းဖြည်း ချင်း တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်” ဟု စာတမ်းဖတ်ကြားသူက ဘာသာပြန်ဆိုပါ သည်။
သဘောထားမှတ်ချက်။ ကော်မရှင်က ဘာသာပြန်ဆိုရာတွင် မူလဝါကျ စာသား၏ အနှစ်သာရကို အပိုအလိုမရှိဘဲ “တိုးတက်သောအစီအမံ” ဟူ၍ ကျစ်လစ်စွာ ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မူလ စာသား အသုံးအနှုန်းအရ နိုင်ငံတော်က တိုးတက်သော အစီအမံ ဆောင်ရွက်ပေးရန် ရိုးရှင်းစွာ ဆိုလိုရင်း ဖြစ်ပါသည်။
၆။ အပိုဒ် ၈ ကို ဘာသာပြန်ဆိုမှု
(က) “Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the Constitution or by law.” ကို “လူတိုင်းသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ သို့မဟုတ် ဥပဒေအရ ၎င်းအား ခံစားခွင့်ပြုထားသည့် မူလ အခွင့်အရေးများကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း ခံရလျှင် ထိုသူသည် စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိ သော နိုင်ငံတော်ခုံရုံးများ၏ ထိရောက်သော ကုစားပေးမှုကို ရပိုင်ခွင့်ရှိစေရ မည်။” ဟု ကော်မရှင်က ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
(ခ) “Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the Constitution or by law.” ကို “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ သို့မဟုတ် ဥပဒေ [များ] အရ ခံစားခွင့် ပြုထားသော မူလအခွင့်အရေး များကို ဖောက်ဖျက်ခြင်းခံရလျှင် ယင်းသို့သော ဖောက်ဖျက်ခံရမှုကို ထိရောက် စွာ ကုစားပေးနိုင်စွမ်း ရှိသည့် နိုင်ငံတော် ခုံရုံးများက ကုစားပေးနိုင်ခွင့်သည် လူတိုင်း၌ ရှိသည်။” ဟု စာတမ်းဖတ်ကြားသူက ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
သဘောထားမှတ်ချက်။ မူလအင်္ဂလိပ်ဝါကျအရ စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော နိုင်ငံတော် ခုံရုံးများ (competent national tribunals) ထံမှ ထိရောက်သော ကုစား ပေးမှု (effective remedy) ကို ခံစားခွင့် ရရှိစေရန် ဆိုလိုရင်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကော်မရှင်က မူလဆိုလိုရင်း အဓိပ္ပာယ်ကို လွဲချော်မှု မရှိစေဘဲ အပိုအလို မရှိ ဘာသာပြန်ဆို ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၇။ အပိုဒ် ၁၂ ကို ဘာသာပြန်ဆိုမှု
(က) “No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to be the protection of the law against such interference or attacks.” ကို “မည်သူမျှ မိမိ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး လွတ်လပ်ခွင့်၊ မိသားစု၊ နေအိမ် သို့မဟုတ် စာ ပေးစာယူ ကိစ္စရပ်များတွင် မတရား ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ မိမိ၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုအား ပုတ်ခတ်ခြင်းကိုလည်း ကောင်း မခံရစေရ။ လူတိုင်းသည် ထိုသို့ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပုတ်ခတ်ခြင်းတို့မှ ဥပဒေအရ အကာအကွယ်ရပိုင်ခွင့်ရှိသည်။” ဟု ကော်မရှင် က ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
(ခ) “No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to be the protection of the law against such interference or attacks.” ကို “မည်သူမျှ မိမိကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပုဂ္ဂလိက ကိစ္စများ၊ မိသားစု၊ နေအိမ် သို့မ ဟုတ် စာပေးစာယူ ကိစ္စရပ်များတွင် [အာဏာပိုင်များက သူတို့ထင်သလို] ဝင် ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်စေရမည်။ မိမိ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ လူအများ အတွင်း ကောင်းသတင်းဂုဏ်တို့ကိုလည်း [စည်းလွတ်ဝါးလွတ်]တိုက်ခိုက်ခံရ ခြင်းမှ ကင်းလွတ်စေရမည်။ ယင်းသို့သော ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနှင့် တိုက်ခိုက် မှုတို့ မဖြစ်ပေါ်စေရန် ဥပဒေတို့၏ အကာအကွယ်ကို ရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။” စာတမ်းဖတ်ကြားသူက ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
သဘောထားမှတ်ချက်။ “privacy” ကို Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Eighth Edition, 2010) တွင် “the state of being free from the attention of the public” ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကော်မရှင်အနေဖြင့် မူလဝါကျပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် လွဲချော်မှု မရှိစေဘဲ “ပုဂ္ဂိုလ်ရေး လွတ်လပ်ခွင့်” ဟု အပိုအလို မရှိ ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
“reputation” ကို Collins Dictionary & Thesaurus (Fifth Edition, 2011) တွင် “notoriety or fame, esp. for some specified characteristic” ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာအဘိဓာန်တွင် “notoriety” ကို “နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားခြင်း” ဟူ၍လည်းကောင်း၊ “fame” ကို “ဂုဏ်သတင်း။ ကျော်ကြားမှု။ ကျော်စောခြင်း။” ဟူ၍လည်းကောင်း အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ ယင်း အဘိဓာန်များအပေါ် အခြေပြု၍ ဖတ်ရှုသူအတွက် နားလည်ရန် လွယ်ကူသည့် စာစကားဖြင့် မူရင်းဆိုလိုချက် အနှစ်သာရ ပေါ်လွင်စေရန် ကော်မရှင်က “ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှု” ဟု ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၈။ အပိုဒ် ၂၁ (၂) ကို ဘာသာပြန်ဆိုမှု
(က) “Everyone has the right to equal access to public service in his country.” ကို “လူတိုင်းတွင် မိမိနိုင်ငံ၏ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ရန် တူညီသည့် အခွင့်အရေး ရှိသည်။” ဟု ကော်မရှင်က ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
(ခ) “Everyone has the right to equal access to public service in his country.” ကို “လူတိုင်းသည် မိမိနိုင်ငံ၏ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတို့ကို [အသုံးပြုနိုင်ခွင့်] ယင်းပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုတို့ကို ညီတူညီမျှ ရယူနိုင်ခွင့်ရှိသည်။” ဟု စာတမ်းဖတ်ကြားသူက ဘာသာပြန်ဆိုပါ သည်။
သဘောထားမှတ်ချက်။ (၁) “public” ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာနက ထုတ်ဝေသော အင်္ဂလိပ်-မြန်မာအဘိဓာန်တွင် “(ခ) ပြည်သူ့။” ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။
(၂) “service” ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာန က ထုတ်ဝေသော အင်္ဂလိပ်-မြန်မာအဘိဓာန်တွင် “၁။ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း။… ၃။ (က) အစိုးရဌာန။ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း။” ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုထားပါ သည်။
(၃) ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း၏ အပိုဒ် ၂၁(၁) တွင် လူတိုင်းသည် အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၌ ပါဝင်ဆောင် ရွက်ခွင့်ကို ဖော်ပြထားပါ သည်။ အပိုဒ် ၂၁ (၃) တွင် အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုအာဏာသည် ပြည်သူပြည်သားတို့၏ ဆန္ဒအပေါ် အခြေခံရမည်ဖြစ်သဖြင့် အဆိုပါဆန္ဒကို စစ်မှန်သည့် ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ဖော်ထုတ်ရမည်ဟု ဖော်ပြထားသောကြောင့် အပိုဒ် ၂၁ ၏ ပါဝင်မှု အကြောင်းအရာ (context) သည် အစိုးရအဖွဲ့အစည်း နှင့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းတွင် လူတိုင်း ပါဝင်ခွင့် ကို ဖော်ပြထားခြင်းသာလျှင်ဖြစ်ပြီး၊ အပိုဒ်ခွဲ (၂) ၏ ဆိုလိုရင်းကို အပိုဒ် ၂၁ ၏ context မှ ခွဲထွက်၍ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း ရယူပိုင်ခွင့်ဟု ပြန်ဆိုပါက လွဲချော်သွားနိုင်ပါသည်။
(၄) ပိုမို၍ သေချာစေသည့် ရည်ညွှန်း အထောက်အထားမှာ ဂျီနီဗာမြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာ မင်းကြီးရုံး (United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights) မှ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိသည့် Teaching Human Rights – Practical activities for primary and secondary schools စာအုပ်တွင် UDHR ၏ Plain language version ၌ အဆိုပါ အပိုဒ် ၂၁ (၂) ကို … You also have the same right to join the public service as anyone else ဟု ရှင်းလင်းဖော်ပြထား သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
၉။ အပိုဒ် ၂၂ ကို ဘာသာပြန်ဆိုမှု
(က) “Everyone, asamember of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international cooperation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.” ကို “လူတိုင်းတွင် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအနေဖြင့် လူမှုဘဝလုံခြုံရေး ရယူပိုင်ခွင့် ရှိသည့်ပြင်၊ မိမိနိုင်ငံ ၏ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် အရင်းအမြစ်တို့အရ အမျိုးသား ကြိုးပမ်းမှုနှင့် နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ဖြင့် မိမိ၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး လွတ်လပ်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အခွင့်အရေးများကို ရရှိခံစားပိုင်ခွင့် ရှိသည်။” ဟု ကော်မရှင်က ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
(ခ) “Everyone, asamember of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international cooperation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.”ကို “လူ့အဖွဲ့အစည်းဝင်တစ်ဦးအနေ နှင့် လူတိုင်းသည် သူ၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ဖွံ့ဖြိုးစေရန် အတွက် လိုအပ်သော လူမှုဘဝလုံခြုံရေးကို ရရှိစေရန် နိုင်ငံတွင်း ကြိုးပမ်းမှု နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ဖြင့် မိမိနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် နိုင်ငံအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော စီးပွားရေး၊ လူမှု ရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးတို့သည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည်ဖြစ်ရာ [ယင်းအခွင့်အရေးတို့ကို] လူတိုင်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။” ဟု စာတမ်းဖတ်ကြား သူက ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
သဘောထားမှတ်ချက်။ UDHR အပိုဒ် ၂၂ ၏ ဝါကျတည်ဆောက်ပုံကို ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာ ကြည့်ပါက Main clause များမှာ Everyone has the right to social security နှင့် Everyone is entitled to realization of the economic, social and cultural rights. တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်စကားရပ်များမှာ အထောက် အကူပြုသည့် phrase များ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ယင်း Main clause များကို အခြေခံ၍ ဘာသာပြန်ဆိုမှသာလျှင် အပိုဒ် ၂၂ ၏ ဆိုလိုရင်း အနှစ်သာရနှင့် ဆီလျော်မည် ဖြစ်ပါ သည်။
၁၀။ အပိုဒ် ၂၄ ကို ဘာသာပြန်ဆိုမှု
(က) “Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.” ကို “လူတိုင်းတွင် ကြောင်းကျိုးလျော်ညီစွာ ကန့်သတ်ထားသည့် အလုပ်ချိန် နာရီ နှင့် လစာ ခံစားခွင့်ရှိသော အခါကာလ အားလျော်စွာ သတ်မှတ်ထားသည့် အလုပ်အားလပ်ရက်များအပါအဝင် အနားယူခွင့်နှင့် အားလပ်ခွင့်တို့ကို ခံစား ပိုင်ခွင့် ရှိသည်။” ဟု ကော်မရှင်က ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
(ခ) “Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.” ကို “လူတိုင်းသည် [အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာမှ] အနားယူခွင့်နှင့် အပန်းဖြေခွင့်ရှိသည်။ အလုပ်ချိန် နာရီများသည်လည်း ကြောင်းကျိုး လျော်ညီစွာ ကန့်သတ်ထား သော အချိန်ပိုင်းကာလများအတွင်းသာ ဖြစ်စေရမည်။ လစာ ခံစားခွင့်ရှိသော အလုပ်အားရက်များကိုလည်း ပုံမှန် (မပေးမနေရ) ရရှိ ခံစားပိုင်ခွင့် ရှိသည်။” ဟု စာတမ်းဖတ်ကြားသူက ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
သဘောထားမှတ်ချက်။ အပိုဒ် ၂၄ ၏ ဝါကျတည်ဆောက်ပုံ အနှစ်သာရအရ ကော်မရှင် က အပိုအလိုမရှိ ကျစ်လျစ်စွာဖြင့် ဆိုလိုရင်းမှ လွဲချော်မှု မရှိစေ ရန် ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စာသားတွင် မပါရှိ သည်တို့ကို ဆွဲ၍ ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းအားဖြင့် မူလ စာသား၏ ဆိုလိုရင်းမှ သွေဖည်သွားနိုင်ပါသည်။
၁၁။ အပိုဒ် ၂၉ (၂) ကို ဘာသာပြန်ဆိုမှု
(က) “In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare inademocratic society.” ကို “မိမိ၏ အခွင့်အရေးများနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များ ကို ကျင့်သုံးရာတွင် လူတိုင်းသည် အခြားသူများ၏ အခွင့်အရေးများနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များကို အသိအမှတ်ပြု၍ လေးစားရန်အလို့ငှာလည်းကောင်း၊ ဒီမိုကရေစီ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် တရားမျှတသော လိုအပ်ချက်များဖြစ်သည့် ကိုယ်ကျင့်တရား၊ အများပြည်သူ အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းရေးတို့ကို ဖြည့်ဆည်းရန်အလို့ငှာလည်းကောင်း ဥပဒေအရ သတ် မှတ်ထားသည့် ကန့်သတ်ချက်များအတိုင်းသာ ကျင့်သုံးပိုင်ခွင့် ရှိသည်။”ဟု ကော်မရှင်က ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
(ခ) “In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare inademocratic society.” ကို “လူတိုင်း၊ လူတိုင်း၏ အခွင့်အရေးနှင့် လွတ် လပ်ခွင့်တို့ကို ကန့်သတ်ရာ၌ အခြားသူတို့၏ အခွင့်အရေးနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်တို့ ကို အသိအမှတ်ပြု လေးစားစေရန်အလို့ငှာနှင့် ဒီမိုကရေစီ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် တရားမျှတသော လိုအပ်ချက်များဖြစ်သော ကိုယ်ကျင့်တရား၊ အများပြည်သူ အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် အထွေထွေ စီးပွားဖြစ်ထွန်းရေးအတွက် လိုအပ်ချက် များကို ဖြည့်ဆည်းရန်အလို့ငှာအတွက် ဥပဒေဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ကန့် သတ်ချက်များကိုသာ ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသည်။” ဟု စာတမ်းဖတ်ကြားသူက ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
သဘောထားမှတ်ချက်။ In the exercise of his rights and freedoms ဟူသော စကားရပ်သည် အပိုဒ် ၂၉ (၂) တွင် ပထမဦးဆုံး ဖော်ပြထား သဖြင့် ယင်းနှင့် ဆီလျော်စေရန် “မိမိ၏ အခွင့်အရေးများနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးရာတွင်” ဟု ကော်မရှင်က ပထမ ဦးဆုံး ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ exercise ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို Dictionary များနှင့် Thesaurus များတွင် ကန့်သတ်ချက်ဟူသော အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုထားသည်ကို မတွေ့ ရှိရပါ။ ကျင့်သုံး (exercise) နှင့် ကန့်သတ် (restrict) တို့သည် ဆန့်ကျင်ဘက် အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါသည်။ အပိုဒ် ၂၉ (၂) ၏ ဆိုလို ရင်းမှာ လူတိုင်း (everyone) အနေဖြင့် ရရှိခံစားပိုင်ခွင့်၊ ကျင့်သုံးပိုင်ခွင့်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းခံစားခွင့်တို့ကို ကျင့်သုံးရာတွင် ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားသည့် ကန့်သတ် ချက်များအတိုင်းသာ (only to such limitations as are determined by law) ကျင့်သုံးပိုင်ခွင့် ရှိသည်ဟု ဆိုလိုရင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေဖြင့် သတ်မှတ်သော ကန့်သတ်ချက်များကို ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသည်ဟု ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ပါ။
၁၂။ ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းကို မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်က အချိန်ယူ၍ ဘာသာပြန်ဆိုရာတွင် မူရင်း ဖော်ပြချက် အဓိပ္ပာယ်မှ လွဲချော်မှု မရှိ စေရန် အထူးဂရုပြုခဲ့ပြီး ဝါကျ၊ စာပိုဒ်၊ စကားရပ် တစ်လုံးစီ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို အဘိဓာန်နှင့် ဝေါဟာရဗေဒကျမ်း (Thesaurus) တို့နှင့် တိုက်ဆိုင်စိစစ် အဓိပ္ပာယ်ဖော် ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ပါ သည်။
၁၃။ ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းသည် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံက အတည်ပြုဖြန့်ချိသည့် စာချုပ်စာတမ်း (document) တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ဘာသာပြန်ဆိုသူ များ၏ တစ်ဦးချင်း အယူအဆအပေါ် မူတည်၍ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုမှုသည်လည်း ကွဲပြားနိုင် မည်ဖြစ်သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်က ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့် အရေးကြေညာစာတမ်းကို ဘာသာပြန်ဆိုရာတွင် မူလဝါကျ၌ မပါရှိသည်တို့ကို စကားရပ် အပိုဖြင့် ချဲ့၍လည်းကောင်း၊ ချုံ့၍လည်းကောင်း၊ ဆွဲယူဖွင့်ဆို၍လည်းကောင်း ဘာသာပြန်ဆို ခြင်း မဖြစ်စေရန် ရှောင်ရှားခဲ့ပြီး စာပေသုံး စကားရပ် အသုံးအနှုန်းမျိုးဖြင့်သာ မူလဝါကျ စာသားအနှစ်သာရ အသုံးအနှုန်းအတိုင်း အပိုအလို မရှိစေရန် ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။